Indesign: yeyantoni | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UNerea Morcillo | 28/09/2021 17:47 | Idizayini yeMifanekiso
Ukuba ujonga inkcazo yoyilo kunye noyilo, uya kufumana phakathi kwazo zonke iinkcazo, igama "InDesign". Ukufunda inqaku elibekwe kakuhle, kunye neyona typography ikhethiweyo kunye nokushiyeka okugqibeleleyo, zezinye zezitshixo ezibonelelwa sisixhobo.
Emva koko, siza kuchaza ukuba yintoni esi sixhobo sibizwa ngokuba yi-InDesign kwaye yeyiphi imisebenzi eyenzayo kwihlabathi loyilo lwegraphic.
1 Yintoni i-InDesign
2 Kwaye ... yenzelwe ntoni?
2.1 Uyilo lomhleli: Imodeli kwiikhathalogu / kwiimagazini zakho kwaye uyile ikhava yakho
2.1.1 Amaphepha amakhulu
2.1.3 Iimpawu zomlinganiswa kunye nomhlathi
2.1.4 Umbhalo oZenzekelayo
2.2 Yenza izixhobo zonxibelelwano
2.2.4 Amaqhosha kunye neefom
2.2.5 Utshintsho kwiphepha
2.2.7 Ukujonga kwangaphambili kokudibana kwe-EPUB
2.2.8 Into ithi
2.3 Phuhlisa iZazisi zeZiko
2.3.1 Ukufakwa kwebrand kwizinto zokubhala (izinto zokubhala)
2.3.2 Ukufakwa kwebrendi kwiincwadana ze-IVC (iZazisi eziHlanganisiweyo zeZiko)
2.3.3 Ukufakwa kwebrendi kwimidiya yentengiso
2.4 Lungisa iifomathi zakho kwiipilisi / kwii-smartphones
2.5 Yongeza iifilimu kunye neefayile zesandi kwiiprojekthi zakho
2.6 Kutheni ukhetha i-InDesign?
Ukuba awukayiva okwangoku, mandikuse kwilizwe lesi sixhobo sinomdla. Nangona ekubonweni kokuqala kungabonakala ngathi, esi sicelo senziwa nge-31 ka-Agasti 1991, kwaye ekuhambeni kwexesha, ukuvela kwayo kuye kwaququzelela umsebenzi wabo bonke abasebenzisi (abayili, ababhali, njl.) Abayinxalenye yeli candelo.
Ngenisa yenye yezicelo / izixhobo ezithambileyo eziyinxalenye yeAdobe kwaye iyasebenza kuphuhliso loyilo, uyilo kunye nemizobo. Okwangoku, iyafumaneka kuzo zombini i-Android, iiWindows okanye i-iOS kwaye yenzelwe ukuba isetyenziswe kuzo zonke iintlobo zezixhobo, ezivela kwiipilisi, kwiilaptops nakwiidesktops.
Baninzi abasebenzisi abasebenzisa esi sixhobo, ngakumbi, ngaphezulu kwe-90% yeengcali zokuyila kwihlabathi liphela bayisebenzisela uyilo / iiprojekthi zabo. Ke yintoni le yenza ukuba inomdla kangaka? Kwesi sifundo sichaza izinto ezenza ukuba zibonakale zibonakala.
Kwaye ... yenzelwe ntoni?
Umthombo: I-Instituto Creativo Digital
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, i-InDesign sisikhokelo esihle kulwakhiwo, kodwa ayisiyiyo yonke into esekwe kubeko, ineempawu ezahlukeneyo zeefonti kunye nee-inki zombala.
Okokuqala, umsebenzi wakho wokuqala ngulo:
Uyilo lomhleli: Imodeli kwiikhathalogu / kwiimagazini zakho kwaye uyile ikhava yakho
Uyilo linoxanduva lokuqamba izinto ezibhaliweyo kunye nemifanekiso yencwadi okanye ikhathalogu, ngenjongo yokwenza ukufunda okungamanzi ngakumbi kunye nokufezekisa ubutyebi obonakalayo.
Ngale nto, i-InDesign inezinto eziluncedo ezinje:
Iphepha eliyintloko liyimodeli efana nephepha, apho kubekwa khona zonke izinto eziphambili (izicatshulwa, imifanekiso, njl.njl. I-InDesign ikuvumela ukuba wenze amaphepha e-master angenasiphelo, ngaloo ndlela uyila amaphepha aphambili kuzo zombini ezingaqhelekanga kunye. Ngamaphepha aphezulu ukonga ixesha kuyenzeka, ngakumbi kwinani lamaphepha.
Njengoko kuchaziwe kwinqanaba langaphambili, ukubalwa kwamaphepha kukwayinxalenye yolwakhiwo kunye nokugcinwa kwabasebenzi okuqinisekisiweyo kwiphepha lamaphepha. Ukwenza oku, kuya kufuneka wenze iphepha eliyintloko kunye nokukhetha »Umbhalo»> «faka uphawu olukhethekileyo»> «Iibhukumaka»> «Inombolo yangoku yephepha».
Iimpawu zomlinganiswa kunye nomhlathi
Ezi zitayile ziiparameter esinokuthi sizenze ngokuthanda ukuzisebenzisa xa kunomdla kakhulu.
Los izimbo zabalinganiswa ziiparameter esizisebenzisa kwigama kuphela. Inkqubo ye- izitayile zomhlathi umhlathi wonke usebenza kubo bonke. Ukuchaza ezi zitayile, siya kukhetho "Window"> "Style"> "Character style".
Ukukhetha okubhaliweyo okuzenzekelayo kukuvumela ukuba ubeke imibhalo ebhaliweyo kwamanye amaxwebhu. Ke ngoko, kufuneka siye kwi "Ifayile"> "Indawo" ukhetho.
I-InDesign inokhetho lokutshintsha imifanekiso kwaye uyilungelelanise nesakhelo sephepha lakho kwaye uyihlukanise nokubhaliweyo. Oku kufezekiswa ngokwenza isakhelo kumlinganiso wethu kwisixhobo se "Rectangular Frame" .Sakuba sinesakhelo, siya ku "Ifayile"> "Indawo" ukhetho kwaye ukhethe umfanekiso esifuna ukuwuvula. Ngeli qhinga, umfanekiso ungena ngokugqibeleleyo kwisakhelo esisenzileyo.
Yenza izixhobo zonxibelelwano
Ngaba uyazi ukuba unokwenza i-PDF yokusebenzisana? Ewe, uyifunda njani? InDesign phakathi kwazo zonke izixhobo zayo, ikwanokhetho olunomdla ngakumbi.
I-PDF yokusebenzisana inezinto ezininzi izinto i-InDesign ibonelela kwaye yenza unxibelelwano lwayo lube nakho, njenge:
Bayakuvumela ukuphawula amacandelo ahlukeneyo kwiPDF. Bayafikelela kwi "Window"> "Interactive"> "Bookmark"
Baxhuma kwiindawo ezimbini ezibonakalayo kwaye bavumela ukufikelela kwamanye amaphepha ewebhu ngonqakrazo olunye. "Ifestile"> "Ukusebenzisana"> "Amakhonkco aphezulu"
Cwangcisa isantya kunye nesantya sezinto, yenye yeendlela onokukhetha kuzo kwi-InDesign yoopopayi. «Ifestile»> «Inxibelelaniso»> »Ixesha»
Amaqhosha kunye neefom
Amaqhosha ayenziwe kwisicatshulwa, umfanekiso okanye isakhelo, kufuneka siguqule ezi zinto zibe ngamaqhosha ukufezekisa unxibelelwano lwabo. "Window"> "Ukusebenzisana"> "Amaqhosha neefom".
Utshintsho lwephepha lubonisa umdla kunye nobuhle kweziphumo kwiPDF, zivela xa ujika amaphepha, kwaye unomdla xa usetyenziswa. "Ifestile"> "Ukusebenzisana"> "Utshintsho kwiphepha".
Oopopayi okanye iimpembelelo, vumela ukuhambisa izinto kuxwebhu. Ihlala isetyenziswa kwimifanekiso okanye iimilo njengezinto ezidadayo. "Ifestile"> "Ukusebenzisana"> "Oopopayi".
Ukujonga kwangaphambili kokudibana kwe-EPUB
Ukujonga kwangaphambili kukuvumela ukuba ukhangele imifanekiso eshukumayo. "Ifestile"> "Ukusebenzisana"> "Imbonakalo yangaphambili ye-EPUB".
Izinto zento zikuvumela ukuba udibanise izinto ezahlukeneyo kwaye uzinike igama ngokwomdla wakho. "Ifestile"> "Ukusebenzisana"> "Into yentsingiselo".
Phuhlisa iZazisi zeZiko
Ukushiya ecaleni indawo yokusebenzisana, i-InDesign inikezela ngamathuba okudala uphawu ukuqala. Ngaba unokwenza uphawu? Ngokwenyani ewe, nangona abayili becebisa ukusebenzisa i-Illustrator. Kodwa emva koko, yeyiphi indima esinayo esi sixhobo kuyilo lwesazisi? Siza kukucacisela apha ngezantsi.
I-brand ayiboniswanga kuphela kwinkangeleko yayo, kodwa kunokwenzeka ukuba kubonisiwe kufakwe kwimidiya emininzi, ezi ndaba zinokuboniswa ngokwasemzimbeni (ngaphandle kweintanethi) okanye kwi-Intanethi. Xa sithetha ngale software ikwazi ukuyila izazisi ezibonakalayo, sithetha ukuba nguye ophethe uyilo lwazo zonke izinto ezifakwa uphawu lwentengiso.
Ezi zinto sifaka ukuba siphawule ngazo zinokuvela kwi:
Ukufakwa kwebrand kwizinto zokubhala (izinto zokubhala)
Izinto zokubhala ezihlanganisiweyo zibonisa isiphumo sokugqibela sophawu lwethu kwaye yindlela elungileyo yokuhambisa kumthengi into esifuna ukuba nayo noyilo kunye nendlela esifuna ukuyithetha ngayo. Kule meko, uphawu luya kuhlala lufakwa kwimidiya enje iifolda, iimvulophu, amakhadi eshishini, iincwadi zokubhala njl.
Indima edlalwa yi-InDesign apha kukudalwa kwazo zonke iifomathi esinokuthi siphawule ngazo kwaye zithathela ingqalelo ukuhanjiswa kwezinto ezinje ngophawu ngokwalo kunye neetekisi okanye izinto eziziisekondari eziye zaphuhliswa yinkampani.
Ukufakwa kwebrendi kwiincwadana ze-IVC (iZazisi eziHlanganisiweyo zeZiko)
Iincwadana zezazisi ziyindlela elungileyo yokubonisa uphawu kwindawo yonke. Ziyilelwe ngokukodwa ukubonisa ukuba uyilo lwebranti luhlangabezana nazo zonke izikhokelo kwaye lubonisa amaxabiso enkampani. Kwincwadana yesazisi kubalulekile ukuba ivele; isihloko, isalathiso, uphawu (ilogo + isimboli), useto lwamehlo kunye nexabiso le-X, ubuchwephesha benkampani, chaza amaxabiso eebrendi, iinguqulelo zebranti, imibala yequmrhu, izinto zokubhala, indawo yokuhlonipha uphawu, umbala, ukungalunganga nokuqinisekileyo, ukufakwa kophawu kwimifanekiso yemvelaphi emnyama / ekhanyayo. Ukufakwa kwebrendi kwimithombo yeendaba emanyelwayo (iifutshane zentengiso, iintengiso, iividiyo, njl.
I-InDesign ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kunye nezikhokelo zokucwangciswa kweencwadana kunye nokunikezela ngobukho bekhontrakthi elungileyo, ngaba uyafuna ukuyila enye?
Ukufakwa kwebrendi kwimidiya yentengiso
Enye indlela yokubonisa uyilo lophawu kukusebenzisa imithombo yeendaba ekwi-intanethi nangaphandle kweintanethi. Imithombo yeendaba yentengiso inceda ukukhuthaza inkampani kwaye ke ukufikelela kwabo kujoliswe kubo. Ukwenza oku, i-InDesign ibonelela ngokwenza iibhilibhodi, iibhilibhodi, iipowusta njl.
Lungisa iifomathi zakho kwiipilisi / kwii-smartphones
Ngaba ubusazi ukuba uneefomathi ezahlukeneyo kwifomthi yakho ngokucofa nje okukodwa? Olunye ukhetho olunikwa yi-InDesign yile ukulungelelaniswa kweefomathi zezixhobo ezahlukeneyo. Ukwenza oku, kuya kufuneka wenze uxwebhu olutsha kwaye ukhethe ukhetho lwe "mobile". Eyona nto ilungileyo malunga nokukhetha le ndlela kukuba unokukhetha ifomathi ngokwendlela yesixhobo. Ndiyabulela koku, ii-mockups ezisebenzisanayo okanye oopopayi banokuyilwa kwaye bajongwe ngokungathi ubenza kwiselfowuni / kwithebhulethi yakho.
Ke ngoko, ngesi sixhobo unokusebenza zombini kwiiphikseli nakwiisentimitha okanye kwiimitha. Kwakhona, ukuba ukhetha "iwebhu" ukhetho, i-InDesign ikunika iintlobo ezahlukeneyo zeefomathi zamaphepha ewebhu kwaye ikwazi ukulungelelanisa iprojekthi yakho.
Yongeza iifilimu kunye neefayile zesandi kwiiprojekthi zakho
Ukuza kuthi ga ngoku, sikuxelele ukuba kunokwenzeka ukungenisa imifanekiso okanye isicatshulwa, kodwa kuyenzeka ukuba ukwenze oko ngeefayile ezinokongezwa kweMP4 kunye neefayile zomsindo ezinokwandiswa kweMP3.
Ukuba ucinga ukuba oku kusebenza kuphela emva kweZiphumo okanye kwiNkulumbuso, mandikuxelele ukuba nge-InDesign unako. Kwaye kunokwenzeka njani ukuba isixhobo esizinikezelwe kubeko sikwabonelela ngamathuba eeprojekthi zemultimedia?Ewe, qhubeka ufunda ukuba siza kukucacisela apha ngezantsi.
Ukongeza ifayile kufuneka uye kwi "Ifayile"> "Indawo" ukhetho kwaye ukhethe ifayile yemultimedia. Xa uyibeka, i-InDesign ikubonisa uhlobo lwesakhelo sento yemultimedia enxulumana ngqo nale uyikhethileyo. Esi sakhelo sinokutshintsha, oko kukuthi, unokutshintsha inkangeleko yaso kwaye ukhethe ubungakanani bendawo yokudlala.
Nje ukuba ifayile engenisiweyo, siye kukhetho «Ifestile»> »Ukusebenzisana>>« Imultimedia », oku kuya kukunceda ufumane imbonakalo yefayile. Okokugqibela uyithumela ngaphandle ifayile kwiPDF kunye nenketho (yokusebenzisana).
Ngexesha lophuhliso lwefayile yakho uya kufumana ukhetho njengokudlala kumthwalo wephepha, ukuphinda, iposta, isilawuli kunye neendawo zokuhambisa. Olu khetho baya kukuvumela ukuba utshintshe useto lweeklip zakho okanye iifilimu kwaye utshintshe noseto lwesandi.
Kutheni ukhetha i-InDesign?
Ukuba ufikelele kweli nqanaba, uyakube uqaphela ukuba i-InDesign yinkqubo epheleleyo apho kunokwenzeka khona ukwenza iiprojekthi ezahlukeneyo. Nokuba ungumyili, umbhali okanye uqala nje ukungena kwilizwe loyilo lwegraphic, Siyakukhuthaza ukuba uqhubeke nokufumanisa iinketho ezingapheliyo ezibonelelwa sesi sixhobo.
Ngaba sele uyikhuphele phantsi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Indesign: yeyantoni?